5 Qalab Webka Sanadkan Gaarka ah Looguna talagalay Naqshadayaasha | Abuurista khadka tooska ah
5 qalab cusub oo khaas ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, dhowr
Maxaan u dooneynaa inaan ku rakibno barnaamij haddii aan ka soo qaadanno bogga internetka waxaan ka heli karnaa qalab weyn oo noo oggolaanaya inaan helno wax kasta oo aan raadineyno iyadoon wax laga soo dejisanayn. Webku wuxuu na siin karaa wax kasta oo aan dooneyno haddii waan ognahay meelaha ugu fiican ama kuwa cusub ee ka imanaya soo-jeedimaha kala duwan ee dhammaan noocyada isticmaaleyaasha.
Ka dib waxaad ka heli doontaa 5 qalab web cusub sanadkaan oo anfacaya dhammaan noocyada xirfadleyda ah, ha noqdo naqshadeeye websaydh, sawir-qaade ama 3D shay-dejiye shay. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay qiime aad u weyn waxaana kugula talineynaa inaad isku daydo inaad la socotaan xirfadaha qaarkood ee shabakadaha shabakaduhu ay iska bixiyaan.
2 Boxy svg
3 Generator-ga Gaarka ah
5 Baadhitaan Kalori
Haddii aad raadineyso bedel Adobe Fireworks, waxaad fiirin kartaa inaad hesho wax qiimo leh. The ugu fiican ee laga helo Mac, sidaa darteed barnaamijkan cusub ee webka loo yaqaan Gravit wuxuu u yimaadaa inuu buuxiyo meelahaas banaan iyo baahiyahaas.
Gravit waxaa ka mid ah miirayaasha waqtiga dhabta ah, hababka tafatirka oo gabi ahaanba waa bilaash. Mid kale oo ka mid ah awoodeeda ayaa ah in mashaariicda aad ka shaqeysid lagu heli doono qaab isku duuban meel kasta oo aad isku xirto.
Un Tafatiraha sawirada vector kaas oo doonaya inuu noqdo bedel lagu xisaabtamo Sawirka iyo Skecth. Loogu talagalay loogu talagalay biraawsarka Chrome, waxay kuu oggolaaneysaa inaad furto oo aad keydiso faylasha SVG iyo SVGZ oo aad soo dhoofsato oo aad dhoofiso faylasha JPEG iyo PNG.
Generator-ga Gaarka ah
Waad abuuri kartaa sawirada asalka ah ee cilladoobay quruxda weyn loo isticmaalo mashruuc kasta. Xaqiiqdii waa bog aad ku haysato dhammaan noocyada sawirada, inkasta oo ay u taagan tahay algorithm kaas oo awood u leh inuu abuuro asal gaar ah.
La wadaagga naqshadahaaga 3D marka macmiilku uusan haysan software-ka ku habboon waxay noqon kartaa dhibaato. Modelo waa qalab iskaashi oo xaliya dhibaatadaas. Waxay kuu ogolaaneysaa Arag, dib u eeg oo ku maamul qaabkaaga 3D iyada oo aan loo baahnayn wax software dheeri ah.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee naqshadeynta websaydhka ayaa ah miisaanka bogga, taas oo saameyn dil ah ku leh beddelaad, haynta, SEO iyo jahwareerka isticmaalayaasha leh xiriir xun. Isticmaalka Kaloriyeyaasha Browser waxaad kuheli kartaa hab fudud oo aad uga feejignaato miisaanka boggaaga.
Haddii aad raadineyso qalab midab leh, Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 5 qalab cusub oo khaas ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha
Shabakadda Anckla dijo
Dhibaatada ugu weyn ee Chrome ee kordhinta ayaa ah inaad ubaahantahay mac si ay sifiican ugu shaqeeyaan. PC-yada badankood waxay isticmaalaan xusuus aad u tiro badan oo wax faa iido ah kama helaysid barnaamijyada desktop-ka. Kuwaani waa in la tijaabiyo. :)
Ku jawaab Anckla Web
Waxaad u sheegi doontaa sida ay u socdaan! Salaan!
Wareegyo leh qaab dhismeed qurux badan oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan adduunka